Ngo-2005, umqondisi u-Andrei Proshkin wethula isithombe esithi "I-Decameron" yabasosha kubabukeli. Abadlali babonisa izinsuku ezimbalwa kusukela empilweni yempi. Basebenzisa kakhulu "indima", "abakhulu" kanye nezikhulu. Abalingiswa baphoqeleka ukuba "badonse ibhande lempi" ngokuzethemba, ukudakwa nokuthandana. Ngelinye igama, labo abathanda izihloko zempi bazoba nhlobo njengefilimu ethi "I-Decameron yeSoldier". Abadlali badlala indima yabafana abaphupha ukuvuselela kanye nendlela eya ekhaya. Kodwa-ke, akuwona wonke umuntu kulolu phiko onenhlanhla. Ngokungazelelwe umyalo ufika ukuthumela abafana empini ...
"I-Decameron yamaSulumane": abadlali nesakhiwo
Ngakho, ngaphezulu. Ukuqashelwa kwababukeli abaningi bekwazi ukuwina isithombe "Decameron Soldier". Abadlali badlala indima yabo nje kuphela. Futhi lokhu akumangalisi. Phela, izindima eziyinhloko ngamakhono (Elena Liadova, Julia Vysotskaya, Mikhail Porechenkov, Alexander Yatsenko).
Isithombe sibonisa impilo yeyunithi yezempi yesifundazwe evamile. I-cadet yangaphambili uBoris ihlangana kanye namadodakazi amabili e-lieutenant colonel. I-Dembel Gene iyakuthanda nomka-lieutenant, engazi lutho ngakho, ecabanga ukuthi umyeni wakhe uletha izimbali kuye ebusuku. Ngokuvamile, zonke izinyembezi ziyi-corny. Ngenkathi ingxenye ingabonakali "ighost". Ngethusa, konke! Kuze kube yileso sikhathi, kuze kufike izinkinga zangempela. Laba bantu bathunyelwa e-Chechnya.
Okuningi mayelana nezinhlamvu
Esikhathini sefilimu, abadlali abaningi abadumile badutshulwa: Yatsenko, Liadov, Vysotskaya, Porechenkov, Tukaev, Agafonov, Gurkin, Shevchenkov, Korshunova nabanye. Umdlalo umane nje unganakulinganiswa. Ngandlela-thile, emcimbini "uMsombuluko waseMoscow" ngo-2005 ngendima engcono kakhulu yesilisa eyanikezwa u-Alexander Yatsenko. Amafilimu ngokubamba iqhaza kwakhe, noma kunjalo, kubangela ukuqhuma ("Fartsa", "Insight", "Flower of a fern" nabanye).
Kulesi sithombe, lo mculi wadlala uBur Kul Kulshan, axoshwa esikoleni esindizayo esitokisini esincane, wangena ezincwadini zakhe zendodakazi yenkosikazi ye-lieutenant colonel. Ezinye izindima zadlalwa nguGurkin Andrey (idemoni likaGene Savitsky), u-Shevchenkov Alexey (Ensign Konek), uLyadova Elena (indodakazi kaLakina Marina), u-Agafonov Alexander (Oskin), uSolovyov Victor (umbongi), uTeplov Igor (Timoshenko), uKorshunova Claudia (indodakazi kaLukin U-Natalia), uYegorov Boris (Mazin), uBagrov Grigory (uCaptain Smirnov), uPavenko Dmitry (uLieutenant Zlotnik), uPorechenkov Mikhail (i-Afghan starter Panteleyev), uVysotskaya Julia (umkaPeleyeva Vera), uTomashevsky Pyotr (Bolshakov).
Ngaphezu kwalokho, zivela ngezikhathi ezithile kanye nabanye abaculi abadumile kule filimu "Soldierskiy decameron". Abadlali abadlala amaqhawe "ohlelweni lwesibili": U-Zvonareva Maria (umfazi wehhashi), u-Ekamasova Dasha (indodakazi yehhashi), u-Aminov Ural (Shagentsukov), u-Rahmanova Irina (umqhubi wocingo wePharadesi), uBerda Alexander (uMajor-General Yaremchuk), uTukaev Kamil (uLieutenant Colonel Lukin ), USaprykina Oksana (umkhwekazi uYaremchuk), uVanifatev (Grigoryants), uKarpov Konstantin (umshayeli weMorozov).
Zonke izinhlamvu zibalulekile
Futhi ekugcineni. Abalingiswa abancane, uma ubheka ifilimu ekuboneni kwefilosofi, kusasekho. Ku "Decameron" konke kubalulekile. Ngemuva kwalokho, amaqhawe amaningi lapha, njengabantu abaningi okuthiwa "amaphupho amahle". Zibonele wena: U-Natasha uhlangana noBoreas, uBorya uyamkhathaza uMarina, uVera uyamcasula uSeryozha, kodwa uthanda uGena, uSergei akakwazi ukuma ngesithuthuthu sikaBoris futhi uhamba "nomoya", futhi wonke umuntu wesaba "izimpumputhe".
Ngokuvamile, intsha eqinile yamahlaya. Nakuba phakathi kwemigqa bese ufunda idrama yothando, umona nomhawu, isifiso sezenzo zobuqhawe kanye nokuphila okuhle. Ngelinye igama, ibhayisikili "lesosha" liphinde lenziwe njengomfanekiso. Mayelana nephupho lomuntu elilula. Ukuthanda nokuthandwa, ukuhlala nokuvikela izwe lakho. Ngokuvamile, uma ungumshayeli wama-movie ngokuphila kwempi, yilokho okudingayo! Ukubuka okujabulisayo!
I-Blockbuster "Everest". Incazelo yefilimu
Ukukhwehlela nge ikhwela umntwana: Izimbangela Nezingozi Ukwelashwa
Yiziphi izithako amaqanda namuhla